Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka oo soo xiray Shirweynaha Qaran ee Dhalinyarada – Radio Muqdisho
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee Xukuumadda Soomaaliya, waxaa ka qeyb galay Boqolaal Dhalinyaro oo kala yimid Gobalada dalka.
Warmurtiyeed ka kooban qodobo muhiim ah ayaa laga soo saaray Shirkan, waxaana ay kala yihiin:-
In si wada jir ah looga qeyb qaato dhaqan galinta siyaasada qaran ee dhalinyarada.
In la howl-geliyo golaha dhainyarada qaran KMG ah,si uu unoqdo meel ay hogaamiyaasha dhalinyarada ku sameeystaan, kuna bartaan hogaaminta wanaagsan looguna olaleeyo danaha dhalinyarada Soomaaliyeed.
In dhalinyarada loo abuuro fursado shaqo.
In loo sameeyo kulamo joogta ah si loo xoojiyo iska warqabka dhalinyarada loona helo dhalinyaro u ababulan horumarka dalka.
In dhalinyaradu hesho adeegyada aasaasiga u ah sida waxbarasho tayo leh caafimaad
In culimadu ay ku yeeshaan door muhiim u ah jiheynta maskaxda dhalinyarada lagana wacyi geliyo figradaha xagjirnimada.
In qof walba oo dhalinyaro ah lagu dhiiri galiyo waxyaabaha hibada gaarka ah uu leeyahay.
In aqoonta dhallinyarada diini iyo mid maaddiba ah kor loo qaado.
In mudnaanta 1aad la siiyo dhallinyada dalka wax u baratay, si ay u buuxiyaan fursadaha ajanaiibta heysato.
In la helo goobo lagu madadaalliyo dhallinyarada.
In dastuurka JFS ee KMG ah lagu cadeeyo xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed xiliga lagu jiro dib u eegista.
In ay helaan caddaalad iyo nidaam dowladnimo oo kala haga.
In a baro waddaniyadda iyo qiimaha dalku leeyahay.
In kaalin muhiim ah ay ku yeeshaan siyaasadda iyo dowladda qeybaheeda kala duwan.
In loo muujiyo kalsooni iyo tixgalin waxyaabaha ay qaban karaan.
In la ilaaliyo manhajka waxbarashada tayadiisa laga wada tashto arimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga lagana qeyb galiyo dhalinyarada.
In garab istaag iyo dhiiri galin loo sameeyo dhalinyarada ku tiirsan kheeyraadka dalka (beeraha kallumeysiga iyo xanaanada xoolaha)
In la isku xiro ganacsatada iyo dhalinyarada si ay u helaan fursado shaqo loona abuuro sanduuqa horumarinta dalka.
Waa in dhalinyaradu isku kaashato sidii dalka loo hormarin lahaa qof kastana xil is kaga saaro sugidda ammaanka daka iyo tagaeerida dowladnimada si aan u gaarno Nabad iyo Nolal hormarsan.
Waa in dhaliyaradu kaalin mug le ka qaataan caafimaadka, faaya dhowrka, Nadaafadda waxbarashada , fanka iyo suugaanta , ciyaaraha. caawinta dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba ,bilic soo celinta magaalooyinka iyo guud ahaan dalka soomaaliya.
In dhalinyarada loo sameeyo xarumo ay ku kulmaan ayna fikradooda ku kala qaataan.
In dhallinyaradu bartaan taariikhda ummadda soomaaliyeed si ay wax uga bartaan isagana jiraan qalalaadkii hore iyo fikradaha guracan ee xagjirnimada ah.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa shirkan furay 17-kii bishan, isagoo tilmaamay in dawladdani ay mudnaan gaar ah siisay dhalinyarada, laguna tilmaamo dawladdii shacabka. Isagoo xusay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwo firfircoon oo diyaar u ah ka qeybqaadashada horumarka dalka ka jira.